भूपेन्द्रको मोबाइलमा भेटियो ड’रलाग्दो र’हष्य,फोन गरेर यसरी मा’र्ने प्लान (भिडियो हेर्नुहोस्) – Sandesh Press
भूपेन्द्रको मोबाइलमा भेटियो ड’रलाग्दो र’हष्य,फोन गरेर यसरी मा’र्ने प्लान (भिडियो हेर्नुहोस्)
November 15, 2021 166
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पूरा भिडियो हेर्नुहोला, यो पनि पढ्नुहोस
घ्याल्चोक, गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जनताका घरदैलोमा पुगेका छन् । जसपाको सुज (पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन) अभियान लिएर उनी गोरखाका सबै गाउँपालिका/नगरपालिकामा जनताको घर-घरमा पुग्ने अभियान थालेका हुन् ।
यो सुज अभियान कार्तिक २२ देखि मंसिर ३ गते सम्म संचालन हुने जनाइएकाे छ । तल्लो तहका जनताका गुनासा र वास्तविकता बुझ्न र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबारे बुझाउन उनी यस्तो अभियानमा निस्केका हुन् । अभियान मंसिर ३ गते बाल्वामा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम पश्चात टुंगिने छ ।
सुज अभियानको पहिलो दिनमै भट्टराईले आफू भोट माग्न नभई जनताको वास्तविकता हेर्न र समस्या समाधानको पहल गर्न घर–घरमा आएको स्पष्टीकरण दिए । उनले सही राजनीति नभएसम्म देश नबन्ने ठोकुवासमेत गरे ।
अहिलेको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले देशको विकास हुन नसक्ने उनको दाबी थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा(नेकपा) विभाजनलाई उदाहरण दिएर भट्टराईले पुरानो पार्टीबाट अब विकास र समृद्धि सम्भव नहुने विश्लेषण गरे । साम्यवादको अमूर्त कुरालाई छाडेर सबै राजनीतिक पार्टीलाई समाजवादी धारमा लाग्नसमेत उनले आग्रह गरे ।’
पुराना पार्टीबाट देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । विकासको लागि सबैभन्दा पहिले राजनीति ठीक ठाउँमा आउनुपर्छ,’ जनभेटघाटको क्रममा उनले भने, ’जात र गोत्र त परिवर्तन हुन्छ । विकासको लागि पुरानै पार्टीमा बस्नुपर्छ भन्ने छ्रैन । हाम्रो सोच बदल्न जरुरी छ ।’
दुई–दुई पटक विघटन भएर संसदले पुनर्जीवन पाएको छ । यससँगै तत्कालको लागि प्रतिगमनको खतरा टरेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता, हरेक पार्टीभित्रको बेथिति, देश र राजनीतिको कथाव्यथा भने उस्तै छ ।
एमसीसीले देश बिकास गर्ने
गोरखा गण्डकी गाउँपालिकाका ३ र ८ नम्बर वडा लगायतका जनताले एमसीसीबारे पनि भट्टराईलाई जिज्ञासा राखे । संसदमा उठेका एमसीसीबारे पक्षविपक्षका सवाल/जवाफलाई उदाहरण दिँदै उनीसँग गण्डकी गाउँपालिकाका जनताले ‘एमसीसी पास गरे देश खान्छ भन्छन् के हो’ भनेर सोधे ।
जबाफमा भट्टराईले नेपालमा विकास नहोस् भन्ने तत्वहरुले नै एमसीसीबारे भ्रम छरेको बताए । यसमा भारत, चीन र अमेरिका लागेको उनको आरोप थियो । एमसीसी सहयोग लिएर देश विकास गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले एमसीसीबारे शंका नगर्न जनतालाई आग्रह गरे ।
एमसीसीले देश खान्छ भन्ने भ्रम हो भन्दै उनले भने, ‘एमसीसी पास गरे यहाँ अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ, नेपाल खान्छ भन्छन् । यी सबै भ्रम हुन् । त्यसाे भए, नेपाली सुरक्षाकर्मी के हेरेर बस्छ ? हामी चुप लागेर बस्दैनौं नि । अहिले त हामी सहयोग लिने हो, विकास र समृद्धिमा लाग्ने हो । अहिले कसैसँग निहुँ खोज्ने अवस्थामा हामी छैनौं । पहिले हामी बलियो बन्ने हो अनि पो कसैले हेप्न सक्दैन । अहिले एउटाले सहयोग दिन लाग्दा अर्को देशले भ्रम छर्ने काम गरेको छ, यो गलत काम हो ।’
Prevबोलचाल बन्द भएका मामा गोबिन्दाको बारेमा कृष्णले फेरी यसरी मजाक उडाए
Next८ वर्षको छोरालाई फ्रान्स लगएर पढाइदिन्छु भनेपछी पठाउदाँ १५ वर्ष देखि बे’पत्ता (भिडियो हेर्नुस)
के तपाई सपनामा नाग देख्नुहुन्छ ? कस्तो नाग देख्दा मिक्छ शुभ सङ्केत ? हेर्नुहोस् !